नेपाली नायिकाको धनाढ्य मोह - फ्रन्टपेज - साप्ताहिक
नेपाली नायिकाको धनाढ्य मोह
- कृष्ण भट्टराई / विदुर खतिवडा
नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा स्थापित तथा स्थापित हुन संघर्ष गरिरहेका नायिकाहरू वैवाहिक जीवनमा बाँधिने क्रम जारी छ । उमेर पुगेपछि विवाह गर्नु स्वभाविक हो तर नेपाली नायिकाहरूले श्रीमान्का रूपमा रोजेका अधिकांश पुरुष गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) हुनु भने संयोग मात्र होइन । पछिल्ला केही वर्षयता नेपाली नायिकाहरूले गरेका विवाहको विश्लेषण गर्ने हो भने अधिकांशले विदेशमा व्यवसाय गरेर बसिरहेका पुरुषलाई श्रीमान् बनाउने परम्परा बढिरहेको देखिन्छ ।
त्यसै पनि नायिकाहरू उमेर र बैंस छउन्जेल मात्र चलचित्रमा सक्रिय हुन्छन् । उमेर ढल्किन थालेपछि नायिकाहरू घरजम गर्न लालायित हुन्छन् । घरजम गर्न उनीहरू आर्थिक रूपमा सक्षम पुरुष नै रोज्छन् । त्यसैकारण वैदेशिक रोजगारी तथा विदेशमा व्यवसाय गर्ने नेपाली तथा भारतीय पुरुषहरू नेपाली नायिकाको पहिलो रोजाइ बन्न थालेको देखिन्छ ।
विदेशमा बसोबास गर्ने नेपाली युवासँग नेपाली नायिकाहरूले स्वदेशमै धूमधामका साथ विवाह गर्ने परम्परा छ । विवाह गर्ने अधिकांश नायिकाले केही अवपादबाहेक काठमाडौंका पाँचतारे होटल नै रोजेका छन् ।
अभिनेत्री करिश्मा मानन्धरले श्रीमान् विनोद मानन्धरलाई पहिलो पटक बेलायतमा भेटेकी हुन् । बेलायतमा रेस्टुराँ व्यवसायीका रूपमा सक्रिय छँदै विनोद मानन्धरले बेलायतमै चलचित्र ‘कस्तूरी’ को छायांकन गर्ने निर्णय गरे । उक्त चलचित्रकी अभिनेत्री थिइन्— करिश्मा केसी । चलचित्रको छायांकनका क्रममा नजिकिएपछि करिश्मा र विनोदले विवाह गर्ने निर्णय गरे । वैवाहिक जीवनको दुई दशक पूरा भैसक्दा करिश्मा र विनोद काठमाडौंमै स्थायी बसोबास गरिरहेका छन् । करिश्माले विनोदलाई श्रीमान् बनाउने निर्णय गर्दा विनोद गैरआवासीय नेपालीका रूपमा चिनिन्थे ।
चलचित्र ‘झोला’ बाट लोकप्रियताको शिखर चुम्न सफल अभिनेत्री गरिमा पन्तले भने अलि पृथक् शैलीमा विवाह गरिन् । लामो समयदेखि स्वदेशमा नरहेकी गरिमाले दुई साताअघि मात्र बेल्जियममा रेस्टुराँ व्यवसाय गरेर बसिरहेका हरि शर्मा थपलियासँग विवाह गरेको समाचार सार्वजनिक भयो । दर्जनौं चलचित्रमा अभिनय गरेर नायिकाका रूपमा अलग स्थान बनाएकी गरिमाले गरेको गुपचुप विवाहले उनका सहकर्मी नायिकाहरूसमेत आश्चर्यमा परे । नायिकाको भूमिकामा जमिरहेकी गरिमाले विवाहपछि बेल्जियममै बसेर श्रीमान्को रेस्टुराँ व्यवसायलाई अघि बढाउने योजना सार्वजनिक गरिसकेकी छिन् । अघिल्लो साता बेल्जियममै उद्घाटन गरिएको रेस्टुराँ ‘गरिमा सुसी रेस्टुराँ’ आफ्नै नामबाट स्थापना गरिएकाले पनि गरिमा अब पुन: स्वदेश फर्किएर नेपाली चलचित्रमा सक्रिय होलिन् भन्ने सम्भावना अत्यन्त न्यून छ ।
गरिमा पन्तको विवाहको खबर सार्वजनिक भैरहँदा नायिका तथा मोडल सिम्पल खनालको विवाहको आकर्षक निम्तो पत्र काठमाडौंमा वितरण भैरहेको थियो । सिम्पलले पनि विदेशमै बसोबास गर्ने व्यक्तिलाई श्रीमान् बनाएकी छिन् । सिम्पलका श्रीमान् नदिन भारतीय मूलका व्यवसायी हुन् जो बेलायतमा बसोबास गर्छन् । सिम्पलको यो दोस्रो विवाह हो । यसअघि उनले म्युजिक भिडियो तथा चलचित्र निर्देशक प्रसन्न पौडेलसँग विवाह गरेकी थिइन् । सिम्पल र प्रसन्नको वैवाहिक जीवन लामो समय टिक्न सकेको थिएन ।
केही महिनाअघि नायिका तथा मोडल रीमा विश्वकर्माले पनि विवाह गरिन् । रीमाले पनि श्रीमान्का रूपमा एनआरएनलाई नै रोजिन् । बेलायतमा बसोबास गर्ने रोबर्ट ल्वागुन (विश्वकर्मा) लाई रीमाले जीवनसाथीका रूपमा रोजेकी हुन् । गत असोजमा हयात होटलमा रीमा र रोबर्टले एक–अर्कालाई जीवनसाथी स्विकारेका थिए । विवाहपछिको भव्य भोजमा रीमाले अधिकांश चलचित्रकर्मीलाई निम्त्याएकी थिइन् । विवाहपछि रीमाका श्रीमान् बेलायत फर्किएका छन् भने रीमा अहिले पनि स्वदेशमै रहेर अभिनय कर्मलाई निरन्तरता दिइरहेकी छिन् ।
केही वर्षअघि नायिका रेजिना उप्रेतीले पनि विदेशमै बसोबास गर्ने नेपाली युवकलाई श्रीमान् बनाइन् । रेजिनाले सांस्कृतिक कार्यक्रमका क्रममा बेलायतमा चिनजान भएका सुरज पोखरेलसँग लगनगाँठो कसेकी हुन् । रेजिना र सुरजले काठमाडौंमा विवाह मात्र गरेनन्, विवाहभोजमा ठूलो संख्यामा चलचित्रकर्मीहरूलाई निम्तासमेत गरे । विवाहपश्चात् चलचित्रबाट अलग भए पनि रेजिना भने स्वदेशमै छिन् ।
हर्षिका श्रेष्ठले पनि श्रीमान्का रूपमा नेपालबाहिर बस्ने पुरुषलाई रोजेकी छिन् । हर्षिकाले भारतीय व्यवसायी प्रसुन झुन्झुनवालसँग लगनगाँठो कसेकी हुन् । प्रसुन कोलकाताका स्थायी बासिन्दा हुन् । विवाहपछि प्रसुनले हर्षिकालाई बलिउडमा डेब्यु गराउने प्रयास जारी राखेका छन् ।
पुरानी नायिका बिपना थापाले पनि भारतीय युवकलाई नै श्रीमान् बनाएकी छिन् । आशुतोष भारद्वाजसँग वैवाहिक जीवन प्रारम्भ गर्ने बिपना सात वर्षीया छोरा कुशाग्रकी आमासमेत हुन् । भारतमा कुशल गृहिणीका रूपमा सक्रिय बिपना अहिले आफ्नो समय परिवारको सेवा तथा छोरा हुर्काउन बितिरहेको बताउँछिन् ।
पूर्व मिस नेपाल तथा नायिका झरना बज्राचार्य पनि भारतीय मूलका मलेसियाली व्यवसायी राहुल अग्रवालसँग वैवाहिक जीवन बिताइरहेकी छिन् । झरनाले हालै मात्र आफू गर्भवती भएको जनाउ दिने तस्बिर सामाजिक सञ्चालमार्फत सार्वजनिक गरेकी थिइन् । विवाहपछि चलचित्र क्षेत्रबाट अलग रहेकी झरनाले आफू मलेसियामा सेटल हुने क्रममा रहेको जानकारी पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत नै दिइसकेकी छिन् । राहुलसँग विवाह गर्नुअघि झरनाले बेलायतका नागरिकसँग इन्गेजमेन्ट गरेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो, तर उक्त सम्बन्ध विवाहको स्वरूप लिन नपाउँदै टुक्रियो ।
त्यसो त पुरानी नायिका सारंगा श्रेष्ठले पनि विदेशी नागरिकसँग वैवाहिक जीवन प्रारम्भ गर्दै अमेरिकाको यात्रा तय गरेकी थिइन् । अमेरिकी नागरिकसँगको सारंगाको सम्बन्ध लामो समय टिक्न सकेन । सम्बन्ध–बिच्छेद गरेपछि सारंगाले अहिले एक जना नेपालीलाई नै श्रीमान् बनाएकी छिन् । म्याग्दीका रमेश कार्कीसँग सन् २०१२ मा सारंगाले कानुनी रूपमै विवाह गरेकी थिइन् ।
नायिका जल शाहले पनि विवाहका लागि गैरआवासीय नेपाली नै रोजेकी छिन् । लामो समयदेखि चलचित्र क्षेत्रबाट टाढा रहेकी जल शाहले अमेरिकामा बसोबास गर्ने शरदकुमार रिमालसँग लगनगाँठो कसेकी हुन् । विवाह गरेको लामो समयपछि अहिले आएर जल सार्वजनिक समारोहहरूमा उपस्थित हुन थालेकी छिन् । गत वैशाख १२ को भूकम्पपछि पीडितहरूलाई सहयोग वितरण गर्न नेपालसमेत आएकी जलले केही महिनाअघि अमेरिकामै च्यारिटी कार्यक्रम आयोजित गर्दै अभिनेता राजेश हमालसहितको समूहलाई स्टेजमा उतारेकी थिइन् ।
पुराना नायिकाहरूमध्ये कृष्टि मैनाली पनि विवाह गरेर अमेरिकामै छिन् । युना उप्रेती पनि अमेरिकामै बसोबास गर्ने नेपाली युवासँग विवाह गरेर उतै बसोबास गरिरहेकी छिन् । युनाले विकास अधिकारीलाई जीवनसाथी बनाएकी हुन् । सुरज चन्दसँग डिभोर्स लिएर अमेरिका पुगेकी पूजाले त्यहाँ अर्का नेपालीसँग विवाह गरेकी छिन् ।
ग्ल्यामरस लाइफ मेन्टेन गर्न धनी नै खोज्नुपर्छ
ज्ञानु क्षेत्री, समाजशास्त्री
नायिकाहरूले सम्पन्न जीवनसाथी खोज्नुको कारण के होला ?
नायिकाहरूले मात्र होइन, आमरूपमै आर्थिक रूपमा सम्पन्न जीवनसाथी खोजिन्छ, तर विशेषत: नायिकाहरूले समृद्ध व्यक्ति रोज्नु उनीहरूका निम्ति बाध्यताजस्तै हो । उनीहरू ग्ल्यामर क्षेत्रसँग आबद्ध हुन्छन्, लाइफस्टाइल ग्ल्यामरस हुन्छ । ग्ल्यामरस लाइफका कारण जीवन खर्चिलो हुने भएकाले उनीहरूले भविष्य सुरक्षित राख्न सम्पन्न व्यक्ति रोज्नु स्वभाविकै हो ।
त्यति मात्र आधार हो त ?
होइन, हाम्रो समाज पितृ सत्तात्मक अवधारणामा चलेको छ, आफूभन्दा शिक्षित, समृद्ध, ठूलो जात, धेरै सामाजिक प्रतिष्ठा, धेरै कमाउने जस्ता कुरा जीवनसाथी खोज्ने मामिलामा हेरिन्छ । खासगरी एरेन्ज म्यारिजमा यस्तो कुरा ख्याल गरिन्छ । जीवन चलाउन पैसा सबैभन्दा आवश्यक तत्त्व हो भन्ने ठान्नेहरूले त्यो पृष्ठभूमिमा आर्थिक रूपमा बलियो युवक खोज्ने हो ।
धनी युवक रोज्दा उनीहरूको आत्मसम्मानमा ठेस त लाग्दैन ?
विचारका हिसाबले हेर्दा, जीवनसाथी सम्पन्न हुनु नै मुख्य कुरा होइन । मुख्य कुरा दम्पतीबीच मन मिल्नु आवश्यक हुन्छ । दिनभर दु:ख गरेर भए पनि बेलुकाको खाना खुसी भएर खाने र हाँसीखुसी संवाद गर्दै बाँच्नु धेरै सार्थक हुन्छ । गरगहनाले पुरिएर पनि बेलुका एक–अर्काको अनुहार हेर्न नसक्ने, संवाद नगर्ने, ढाड फर्काएर सुत्ने हो भन्ने त्यो दाम्पत्य जीवन दु:खमय हुन्छ । नायिकाको आत्मसम्मानमा ठेस नपुर्‍याउनका निम्ति पुरुष साथीले गर्ने व्यवहार महत्वपूर्ण हुन्छ । उसले आफ्नी श्रीमतीलाई उचित स्थान दियो भने त ठीकै छ, नत्र वैवाहिक जीवनमा पूर्णविराम लाग्छ ।
सम्पन्न पुरुषले नायिकासँग विवाह गर्नुको केही कारण होला नि ?
यसमा दुवै पक्षको स्वार्थ जोडिएको हुन्छ । जसरी नायिकाहरूले सम्पन्न पुरुषमा जीवन सुरक्षित ठान्छन्, त्यसरी नै पुरुषले पनि ग्ल्यामर क्षेत्रको चर्चित युवतीलाई आफ्नो बनाउन पाएको महसुस गर्छन् । यो स्वार्थलाई दुवैले आत्मसात् गरेर एक–अर्काका कमी–कमजोरीलाई सच्याउँदै एक–अर्कालाई परिपूरक ठानेर उनीहरू अगाडि बढे भने अवश्य त्यो दाम्पत्य जीवन सफल हुन्छ । हामीले देखेका छौं, कतिपयको जीवन खुसीसाथ अघि बढेको छ । कति स्थायी सम्बन्ध कायम गर्न नसकेर सम्बन्ध–विच्छेदको बाटोमा अग्रसर भएका छन् । कतिपय सम्बन्ध सुखद नभएको अवस्थामा पनि सम्बन्धलाई समाजका कारण चलाइरहेकै हुन्छन् ।
सम्पन्न पुरुषसँगको जीवन सुखद बनाउन नायिकाहरूले विवाहपछि आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्नुपर्ला त ?
विवाहपछि एक समयसम्म उनीहरू खुसी हुन्छन् तर जब एक–अर्का बीचमा हस्तक्षेप बढ्न थाल्छ, अनि सम्बन्ध बिग्रने बाटोतर्फ लाग्छ । सुख र स्वतन्त्रता गुमेपछि धेरैले थाहा पाउँछन्, गहना किन्दैमा सुख–आनन्द प्राप्त हुने रहेनछ भनेर । पुरुष जीवनसाथीले श्रीमतीको निर्णयमा हस्तक्षेप नगर्दासम्म सम्बन्ध सुमधुर हुन्छ, तर पुरुष जीवनसाथीले सधैं आफ्ना निम्ति त्याग गरोस्, अनावश्यक रूपमा सहयोग गरिरहोस् भन्ने अपेक्षा राख्यो भने त्यहाँ फेरि अर्को समस्या खडा हुन्छ । अर्को मुख्य कुरा, अक्सर विवाहपछि धेरै नायिका पर्दामा फर्किंदैनन् । पर्दामा नफर्की परिवारलाई समय दिँदा उनीहरूको जीवन सहज रूपमा चल्छ । दबाबका कारण होस् वा आफ्नै निर्णयका कारण अक्सर नायिका विवाहपछि अभिनय जीवनमा फर्किंदैनन् । विवाहपछि फेरि अभिनयमा फर्किंदा पुरुष मनोविज्ञान भड्किने सम्भावना हुन्छ ।
प्रकाशित :माघ २७, २०७२
द मेकिङ अफ मिस नेपाल–२०१९ वैशाख २५, २०७६
गाउँ सर्दै साइबर क्राइम वैशाख २०, २०७६
सामाजिक सञ्जाल : बदला साँध्ने हतियार वैशाख १८, २०७६
मिस नेपालका २५ वैशाख ९, २०७६
फर्केर हेर्दा २०७५ वैशाख १, २०७६
तीन हाइप्रोफाइल अपराध चैत्र २३, २०७५